इजरायलबाट निरन्तर गीत संगीतमा राज, फेरि "छटपटी" चर्चामा ! - TinjureOnline
इजरायलबाट निरन्तर गीत संगीतमा राज, फेरि “छटपटी” चर्चामा !
July 22, 2021 TinjureOnline74LeaveaComment on इजरायलबाट निरन्तर गीत संगीतमा राज, फेरि “छटपटी” चर्चामा !
इजरायलबाट निरन्तर गीत संगीतमा राज गरि रहेका गायक गीतकार तथा संगीतकार राज लिम्बुको पछिल्लो चर्चित गीत “छटपटी” सार्वजनिक भएको छ !
चर्चित गायिका अन्जु पन्तको स्वरमा रहेको ‘छटपटी’ बोलको गीतको म्युजिक भिडियो भर्खरै सार्वजनिक भएको हो !
वियोगान्त प्रेम कथालाई समेटेर तयार पारिएको यस गीतको म्युजिक भिडियोमा निता क्षेत्री, टेकेन्द्र कार्की र बिष्णु कट्टेलबीचको त्रिकोणात्मक प्रेमकथा प्रस्तुत गरिएको छ। इजरायलमा छायांकन गरिएको यस भिडियोलाई सन्तोष माबो ( माबो क्रिएशन ) को छायांकन, सम्पादन र निर्देशनमा तयार पारिएको हो।
गायक लिम्बुको आधिकारिक च्यानल ‘राज लिम्बु’ मार्फत भिडियो सार्वजनिक गरिएको हो। विदेशी भूमिमा तयार पारिएको यस भिडियोलाई दर्शक, स्रोताबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भैरहेको छ।
तमू समाज इजरायलको नवौ अधिबेशन सम्पन्न अध्यक्षमा खुशी क्ल्हे तमुस्यो चयन !
एनआरएनए – एनसीसी इजरायलको सातौं राष्ट्रिय अधिबेसन सम्पन्न अध्यक्षमा पुनः गणेश गिरि चयन !
इजरायलबाट गीतकार तथा गायिका माया खनालको तीजको नया कोशेली “काले काले होस” सार्बजनिक भिडीयो सहित !
श्रीकृष्ण को आज बिहेमा आको छु’बोलको नया गीत सार्बजनिक !
गायक सुर्य रानाको अर्को कोशेली “हार्दै हार्दिन “सार्बजनिक । (भिडियो )